Zvese zvakagadzirirwa kuvhurwa kukuru kweApple Antara kuMexico | Ndinobva mac
Mangwana chitoro chitsva cheApple chinovhura muMexico City uye kambani yeCupertino inovhura mafoto akati wandei nemukati uye neruzivo nezve izvo zvinogona kuitwa muchitoro chechipiri munyika. Iyo nyowani Apple Antara Yakakomberedzwa nemamiziyamu, nzvimbo dzekufarira zvetsika uye zvitoro zvekirasi yekutanga, nzvimbo yayo zvinoenderana nevamwe vashandisi munyika iri nani pane yapfuura.
Mikova yechitoro chitsva ichavhurwa mumaawa mashoma ekutambira vashanyi, kunyanya na5 masikati mangwana Chishanu, Gunyana 27. Zvirongwa "nhasi paapuro" vachiona nekubata iyo nyowani iPhone 11 ichangoburitswa, iyo Apple Watch Series 5, iyo hwero hwese hweMac uye zvimwe zvigadzirwa zvekambani chikamu chezvinhu izvo vashanyi kuchitoro ichi chitsva vachakwanisa kuita .
Deirdre O'Brien, Mutevedzeri Mukuru weApple weRetail People anotsanangura muchirevo chepamutemo:
Isu tinofara kuvhura yedu inoshamisa chitoro chitsva mukati meguta Mexico City Tinogamuchira Apple vatengi kuguta rino rinobatikana. Chikwata chedu chinoshamisa hachimirire zvakare kugamuchira munhu wese kuApple Antara nyowani Chishanu.
Chikwata chevanhu vanopfuura zana chiri kutarisira kuti zvese zvinoshanda sezvazvinofanirwa uye ivo vakatomirira kuvhurwa kwechitoro. Sezvakaitika nekuvhurwa kwe chekutanga chitoro cheApple munyika iri munzvimbo yekutengesa yeSanta Fe, zvinokwanisika kuti zvipo zvichagovewa kune vekutanga kushanyira chitoro (kazhinji muchimiro cheT-shati) uye zvinokutendera kuti unyore kune wekutanga Nhasi pazvidzidzo zveApple zvavanotora zuva rimwe chete. Kana iwe uri pedyo nenzvimbo yacho mangwana, inzwa wakasununguka kumira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Zvese zvakagadzirirwa kuvhurwa kukuru kweApple Antara kuMexico
Isa zvishandiso usinga pfuure neApp Store, nekuda kweAltStore